Sochiin Warraaqsa eegalamee jabaate; Tarkaanfiin mootummaas hammaate! | Biiftuubilisummaa
← Sochii Warraaqsa Ummta Aanaa Dandii Jabaate
Barattootii fi Hojjettooti Yunibarsitii Jimmaa Hojii fi Barnoota Irraa Arhaman →
Sochiin Warraaqsa eegalamee jabaate; Tarkaanfiin mootummaas hammaate!
Posted on February 16, 2012	by biiftuubilisummaa
Gabaasa Biiftuu Bilisummaa
Sochii Warraaqsaa barattootni Oromoo yunivaristii Jimmaatti eegalan guyyaadhaa gara guyyaatti bifa jijijjirachuudhaan babal’achaa dhufuurraa kan ka’e mootummaan tarkaanfii hammeenyummaa fudhachuu eegaltee jirti. Haaluma kanaan hanga har’aatti barattoota 20 mana hidhaa Bulchiinsa magaala Jimmaatti kan hiite yoo ta’u, barattoota 6 guutummaatti baruumsarraa akka ari’ataman murteessudhaan, barattoota 3 immoo waggaa tokkoof baruumsarraa adabudhaan, akkasumas barataa 1 akeekkachiisa dhumaatiin akka baruumsa eegalu jechudhaan murtii dabarsitee jirti. Maqaa isaanii fi guutuu gabaasicha akkuma nu gaheen dhaammanna.
Karaa biraa immoo Goodina Iluu Abbaa Bor aanaa Baddalleetti kan argamu omisha Shankooraa Warshaa Shukkaaraa AL_ABESH irratti ammas yeroo lammaffaaf tarkaanfii fudhatameen omishni Shankooraa hektaarri 40 ol ibiddaan barbadaa’eera. Kun kan ta’e kaleessa Gurraandhala 14, 2012 yoo ta’u, “fuuldurattis hanga alagaa hammeenyaan nutti dhufe qe’eerraa of kaasnutti tarkaanfiin kun itti fufa” jechuun ummannii haamilee guutuun wal ijaaraa akka jiru gabaasni SAGLII Wallaggaa irraa nu gahe ni ibsa. Kanumaan walqabatee Poolisiin Naannoo Oromiyaa ummatarratti tarkaanfii fudhachuurraa bayyee of qusataa akka jiranis gabaasa nu gaherraa hubachuun danda’ameera.
Yunivaristii Amboottis dorgommii ispoortii achitti taasifamaa jiru irratti Ilmaan Tigraay keessaa barataan tokko barattoota Oromoo ilaalchisee jechoota arrabsoo dubbate jedhamee dirree ispoortii keessatti barattoota Oromotiin tumameera. Kanarraa ka’uun ilmaan Tigraay tapha ispoortii kana addaan kunnee baana jechuun Bulchiinsa Yunivaristichaatti iyyata dhiyeeffatan jedhama. Gama barattoota Oromotin immoo tarkaanfii mootummaan isaanirra(warra Tigree) goruudhaan fudhachuu maltuuf of qopheessaa jiraachuunis gabaafameera. Waan ta’uuf jiru immoo SAGLIIn Amboo duukaa bu’aa akka jiru nuuf mirkaneessaniiru.